Home Wararka Rooble oo fashilmay & guddiga gobollada waqooyi oo qaadacay doorashada berri
Rooble oo fashilmay & guddiga gobollada waqooyi oo qaadacay doorashada berri
Qoraal war-gelin ah oo ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka ee heer federaal ayaa mar kale lagu shaaciyey in Sabtiga berri ee 7-da Agoosto la qaban doono doorashada guddoonka guddiga maamulaya doorashada kuraasta baalamaanka federaalka ee gobollada waqooyi.
Doorashada waxaa lagu casuumay dhanacyo ay ka mid yihiin warbaahinta iyo daneeyayaasha caalamiga ah ee Soomaaliya. Sida ku cad qoraalka guddiga, doorashadu waxay bilaaban doontaa 11:00 AM – barqonimo, waxayna ka dhici doontaa teendhada Afisyooni.
“Doorashada Guddoonka Guddiga Maamulka doorashadda kuraasta labada aqal ee Somaliland waxa lagu qabanayaa Teendhada Afisiyoone , Sabti 10:00 Am, oo ku beegan 7-Aug-2021. Waxa lagu casuumayaa Saxaafada, Hay’adaha Dawladda, Ururada Bulshada Rayidka, Gudiyada Doorashada iyo Beesha Caalamka,” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay guddiga doorashada heer federaal.
Fariintaan ayaa muujineysa in xukuumadda Rooble ay ku adkeysaneyso in berri la qabto doorashada guddoonka guddiga doorashada Somaliland, iyadoo aan xal laga gaarin tabashada cirka isku shareertay ee hanaanka loo marayo doorashadaas ay ka qabaan siyaasiyiinta reer waqooyi garabka uu hoggaamiyo guddoomiye Cabdi Xaashi.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa mar kale shaaciyey in aysan marnaba ka qeyb-gali doonin doorashada guddoonka guddiga Somaliland, ee uu go’aamiyey Ra’iisul Wasaare Rooble.
Maareeye oo la hadlay idaacada BBC-da ayaa sheegay in Rooble uu ka baxay xayndaabkii dhex-dhexaadnimada, isla markaana uu u xaglinayo dhanka Ra’iisul wasaare ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed oo uu gacanta u geliyay saddexdii xubnood ee guddigaas ee isagu uu soo magacaabay.
“Ra’iisul wasaaraha wax dhex-dhexaad ah ma magacaabin saddexda xubnood ee ka imaanaya dhanka xukuumadda, kuli wuxuu ii siiyey team-kii kale ee Ra’iisul wasaare ku-xigeenkiisa,” ayuu yiri Maareeye oo kamid ah siyaasiyiinta garabka Cabdi Xaashi.
Maareeye ayaa Ra’iisul wasaaraha u soo jeediyay in sidii uu ballan-qaaday uu dhex-dhexaad ka noqdo khilaafka kala dhaxeeya Mahdi Guuleed, uuna qabto doorasho degan oo heshiis lagu yahay, oo uusan gacan siin dhinac gaar ah.